Beeraha | Peluang Usaha Dan Bisnis Internet Online
Ciid Top laga qaaday formation dalool beerto ku qasan phosphate sida 300gr, ka dibna ku rid ciidda ka dib markii godka u kuurgalAgen Judi Onlineaya. Melingkat Polybag gooyaa hoose ee, ka dibna miraha geedka ku riday dalool beerto ee. Polybang markaas kor u soo jiidayaa iyo dhegaysanayay jago ka sida heyna sameeyey si loo hubiyo in polybag ee laga saaray. Beerashada Palm waxaa loo sameeyaa in jihada isla, sidaa darteed qaybinta sinnayn iftiinka qoraxdu oo dhan beerta. Seeds in lagu soo daray leh inta kale ee ciidda top miinada, ka dibna is dulfuulan si qaro weyn.Oo of 3 - 5cm kor ku xusan iyo diirka qumbaha.
5. Dayactirka of Planta. TBM fecundaciónDa'da 1 bil kobcinno sida ugu badan 100 g N / geed leh meel fog of 15 cm ka soo salka asliga ah, intaas ka abuureen 2 jeer sanadkii bilowgii xilli-roobaadka iyo dhammaadka xilli-roobaadka.
b. TM fecundaciónHa bilaabaan sanadka dura 2 ilaa 5 sano. Talaal la siiyay 500 garaam oo HOL, KCl 600 garaam, iyo 200 garaam Kieserit.
c. Cayayaan Coconut iyo xakamaynta cudurka
6. GurashadaLows Gurashada sameeyo haddii midhaha waa dadka da'da ah 12 bilood, sida ugu badan afar meelood ee maqaarka miro waa qalalan iyo brown, content biyaha waa la dhimay haddii midhaha waa la gariirin calaamadsan buuqa badan. Wixii goosashada qumbaha waxaa la samayn karaa bishiiba hal mar, isku haleen karo oo kaliya on miro dhacday, ama midhaha si toos ah qaadaaya ka afkoda. Goynta waxaa la sameeyaa bishiiba mar ay la 1-3 rucubood oo la goostay hal mar. Sida caadiga ah, geedaha timirta ah, waxaa jira 1-3 rucubood in ay leeyihiin ay isku da'da yihiin.
Goynta waxaa la samayn karaa laydhi ee qumbaha dTaruhan Bola Onlinehicin, by sii badaneysa geed, ama sidoo kale adigoo isticmaalaya baallaha. Muhiimadda, hab kasta waxay leedahay faa'iidada iyo khasaaraha ay u kala horreeyaan. Wixii goynta ah waxa la oggol yahay inay ku dhici doonaan, midhaha ka heli doontaa runtii jir. Teapi doonaa, kemunginan miro sidoo kale aad u jir ah si aysan u fiican yahay copra. Si aad miro fuulid ah, fulin karo dhammaan geedaha qumbaha fayadhowrka, si kastaba ha ahaatee, ammaan yar, gaar ahaan goostay-dillaaliinta ma yihiin khubaro. By isticmaalaya baallaha, laakiin beergooyska noqon doonaa ammaan, ma dooran karaan miro in uu yahay dhab ahaantii jir.
Miro la goostay ururiyey in natiijada Gathering (TPH) inay sameeyaan kala soocida qashinka ee. Kala soocida waxaa badanaa laga sameeyaa on block kasta oo beerta ku yaal kadib goosashada la buuxiyo dhamaadka halkii. Yaa aadan u qalmin miro-kala-sooca waa miro ah in ay faaruq tahay oo biyo kuma jirin, soo if-baxay cayayaanka / cudurro, qurmay, jabay, qumbaha hore u soo biqlay ama aad u yar, iyo codku aanay cod marka la gariirin.
Kala soocida Fruit u-qalma ka dibna la kaydiyaa bakhaar ku leh Hayeeshee wanaagsan, heerkulka celceliska ee qolka 25-27 ° C, iyo in laga ilaaliyo, Qoraxda iyo roob by yahay ee Mire Waqaf oo height ugu badan ee 1m. Qaabka uu yahay raso pyramidal fiirsasAgen Judi Bolaho dabacsan iyo sameeyey si joogta ah u isticmaaley si loo ilaaliyo tayada ka hor / baaraandego.